Mere I Kwesịrị Zụlite Travel Na Winter Iji Paris | Save A Train
Home > Travel Europe > Mere I Kwesịrị Zụlite Travel Na Winter Iji Paris
Train njem na oyi na Paris na-abịa na ọtụtụ elele. Na mbụ, ọ bụ kasị ala ụzọ njem. The oche bụ saa mbara, ikwe gị ọzọ legroom karịa ị ga na a ụgbọelu. Aga ụgbọ okporo ígwè bụkwa otu n'ime kasị dịrị nchebe ụzọ na-esi na ị na-aga, karịsịa n'oge oyi.
Cheta na oyi ọnwa bụ obi ọjọọ n'akụkụ ndị ọzọ nke Afrika. snow, sleet, na kefriza okpomọkụ eme ka ọ na ihe ịma aka na egwu maka ọkwọ ụgbọala na ịnyagharịa ụzọ. Bọs ma ọ bụ ụgbọ ala pụtara n'atụghị ụjọ oyi ihu igwe na oké okporo ụzọ. The ụzọ na-amị amị, na a ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ ala nwere ike slide nchịkwa.
N'agbanyeghị nke dreary, kentuoyi weather, Paris na-anọgide a dream ebe isua gburugburu. Ọ dịghị mkpa na-atụ uche si na niile na Paris nwere na-enye nanị n'ihi na nke colder ihu igwe. Ebe a bụ ihe mere ị ga-eleta Paris n'oge oyi na ihe mere ụgbọ okporo ígwè eme njem bụ ụzọ kasị mma na-e:
Winter na Paris
Winter na Paris dara n'etiti December na February. Ọtụtụ ga-ekwu na ihe ndị kacha mma ugboro gaa Paris bụ n'etiti April na June. Otú ọ dị, e nweghị ịgọnahụ na Paris na oyi bụ kpokọtara.
Kwa afọ, na City of Ìhè agbanwe n'ime a Winter wonderland. Dị ka n'oge dị November, obodo osisi rụzie ayama na ikpọ window ngosipụta na-egbuke Christmas osisi. Kere n'otu ntabi ọkụ na-egbukepụ egbukepụ dị iche na isi awọ na mbara igwe. Ice iji atụrụ na Paris bụ nwekwara a dream. Ị ga-ọbụna na-ahụ a ikpe melite na eiffel tower.
January na February nwekwara ndị kasị mma ugboro gaa Paris ngosi ihe mgbe ochie. N'oge oyi ọnwa, enwe ihe ngosi nka ìgwè mmadụ ndị na-amụ na-edoghi na-adị mkpumkpu. Na ọ bụrụ na ị na-na na niile banyere nightlife, Paris mara maka ya afọ-gburugburu. Ọzọkwa, ma ọ bụrụ na ị na-na na a savvy shopper onye chọrọ inweta ihe kasị mma shopping amụọ, Winter Sales na Paris na-agba ọsọ site na January site ufọt ufọt February. Oyi ọnwa nwekwara ndị ọnụ ala oge ịnọ na hotels dị ka ha na-enye ego ụlọ udu n'oge a nke afọ.
Train Travel na Paris na Speed ​​na Style
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ kasị mma na-esi na Paris, ị ga-ahụ na ụgbọ okporo ígwè eme njem bụ otú ime ya comfortably na conveniently. Ọ bụrụ na ị na-ebi na Europe ma ọ bụ na- gawa Paris si a European obodo, multiple elu-ọsọ ụgbọ oloko gaa na nke Paris ụbọchị ọ bụla. Ndị na-esonụ ndepụta na-egosi otú ngwa ngwa ị nwere ike na-abata na Paris site na ụfọdụ nke Europe obodo ukwu nile mgbe ị na-ahọrọ otu n'ime ọtụtụ elu-ọsọ ụgbọ oloko dị:
London na Paris na Eurostar - 2 awa na 23 nkeji
Amsterdam na Paris on Thalys – 3 awa na 20 nkeji
Brussels na Paris na IC - 1 hour na 35 nkeji
Utrecht na Paris na IC - 3 awa na 32 nkeji
Rotterdam na Paris na Thalys - 2 awa na 40 nkeji
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga njem Paris obere, kpọtụrụ anyị maka ndị kasị mma tiketi ahịa. Ịzụ gị tiketi n'ọdịnihu pụtara-mma amụọ. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ inyere gị aka zọpụta ego na oge na anyị mfe ntinye akwụkwọ usoro, Naanị ihe ekpe ime ugbu a bụ ka akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè na SaveATrain.com
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-winter-paris%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / nl na / de ma ọ bụ / ru na ndị ọzọ asụsụ.
#traveleurope europeantravel europetravel longtrainjourneys trainjourney Tranride ụgbọ oloko ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ ụgbọ okporo ígwè njem travelfrance travelparis